ပန်းချီတော် ဆရာချုံ – AnZarTone
ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာ မြန်မာ့ ပန်းချီပညာသည်တွေဟာ အစုအစည်း တစ်ရပ် အနေနဲ့ မြန်မာ့နန်းတွင်းကို ဝင်ရောက်လာပြီး နန်းတွင်း ဓလေ့တွေကို မှတ်တမ်းတင် ရေးဆွဲခဲ့ကြရာက စလို့ “ပန်းချီတော်” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီတော် များထဲမှာ ဦးကြာညွန့်၊ ဆရာစာ နဲ့ ဆရာချုံ တို့ဟာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ ဒုတိယ စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၁၈၆၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ မြင်ကွန်းမြင်းခုံတိုင် ညီနောင်တို့က မင်းတုန်းမင်းကြီးကို ပုန်ကန်ခြားနားတဲ့ အရေး အခင်းကြောင့် ရပ်သူရွာသားတွေ ဟိုရွှေ့ဒီပြောင်း ပုန်းရှောင် နေရတဲ့ ကာလမှာ မောင်ချုံကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ချုံတော၊ ယာတော အတွင်းမှာ ပုန်းလျှိုးရင်း မွေးဖွားလာခဲ့ရတဲ့အတွက် ပထမ အစမှာ မောင်ယာချုံ လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ မောင်စံချုံ၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မောင်ချုံ ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မောင်ချုံဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပန်းချီကို အားသန်ခဲ့ပြီး အသက် (၁၄) နှစ်သား အရွယ်မှာတော့ ပန်းချီတော် ဦးကြာညွန့်ရဲ့သား ဆရာစာ ထံမှာ တပည့်ခံရင်းနဲ့ ပန်းချီပညာကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ ပန်းချီတော် ဦးကြာညွန့်ဟာ ခရစ် ၁၈၇၈ ခုနှစ်၊ သီပေါမင်း နန်းတက်အပြီး နှစ်နှစ်ခန့် အကြာမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သီပေါမင်းက ဦးကြာညွန့်ရဲ့သားဖြစ်သူ ဆရာစာကို ဆက်လက် ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာစာ မျက်စိကွယ်ပြီး အနားယူရတဲ့အခါမှာ ဆရာချုံ ပန်းချီတော်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကနုတ်၊ နာရီ၊ ကပီ၊ ကဇာ လို့ ခေါ်တဲ့ ရှေးရိုးမြန်မာပန်းချီ လေးမျိုး လေးစား ရှိရာမှာ ဂဇာလို့ ခေါ်တဲ့ ဆင်ရုပ် ရေးနည်း ရေးဟန်ဟာ ရှေးမြန်မာ ပန်းချီဆရာတွေ တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာလိုက်စားခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ ဂျပန် ပန်းချီနယ်ပယ်မှာ ၁၄ ရာစု နောက်ပိုင်းကစပြီး ထွန်းကားလာခဲ့တဲ့ အနီးအဝေး ရေးဆွဲနည်း စနစ်ကို ရှေးမြန်မာ ပန်းချီ၊ ပန်းပု ဆရာကြီးတွေက “နတ်ကြည့်” ရေးနည်းလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး အဲ့ဒီ ရေးနည်းကို ၁၈ ရာစု မြန်မာ ပန်းချီလောကမှာ ကြိုကြားကြိုကြား တွေ့မြင်လာခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလက်ရာတွေကို ပန်းချီတော် ဦးကြာညွန့်ရဲ့ လက်ရာ ပုရပိုက် ပန်းချီတွေမှာ အများဆုံး တွေ့မြင်ရပြီး ဆရာစာ၊ ဆရာချုံ တို့က ဆက်လက် ကြိုးပမ်း ခဲ့ရာမှာ တစ်စတစ်စ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၄၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၈ ရက်နေ့ ပါတော်မူတဲ့ နေ့ကို ဆရာချုံတစ်ယောက် မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကာလမှာ ဆရာချုံဟာ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ရပါတယ်။ ဇနီးသည်လည်း ဆုံးခဲ့သလို၊ လူမမယ် သားနှစ်ယောက်နဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဝန်ကိုလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ထမ်းခဲ့ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေက ဆရာချုံကို မသင်္ကာမှုနဲ့ ထောင် (၃) လ ချခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ ကာနယ်ဆလေဒင် က ဆရာချုံရဲ့ ပန်းချီပညာကို နှစ်သက်တဲ့အတွက် သူ့ထံမှာ အမှုထမ်းဖို့ ခေါ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်လည်း ဆရာချုံဟာ တိုင်းတစ်ပါးတို့ရဲ့ လက်အောက်မှာ အမှုမထမ်းဘူး ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
သူ့ကျွန်ဘဝ ပါတကားဟု တွေးတော သုံးသပ်ရင်း ဆရာချုံဟာ နောက်လာနောက်သားများ အမှတ်တရနှင့် ဇာတိမာန် တက်စိမ့်သောငှာ အရှင်နှစ်ပါး ပါတော်မူပုံကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ လယ်ထွန်မင်္ဂလာ သဘင်ကိုလည်း ပြန်လည် ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ နန်းတွင်း မင်း၊ မှူးမတ်တို့ သွားလာ နေထိုင်ခဲ့ကြပုံတွေကိုလည်း ခြယ်မှုန်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်မယ့်လူ မရှိ၊ ချီးမြှောက်မယ့်လူ မရှိခဲ့။
နောက်ပိုင်း ဆရာချုံဟာ ပိတ်တွေကို လက်မ ၂၀ ပတ်လည်အရွယ် ပိုင်းဖြတ်လို့ သစ်သားနဲ့ ဘောင်ကျက် ပြုလုပ်ပြီး ပုံတူရှုခင်း၊ နန်းမြို့ရိုး ဘုရားပုထိုးနဲ့ ဇာတ်နိပါတ်တွေကို ရေးခြယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီကား နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက် စုမိတဲ့အခါ ဘုန်းကြီးပျံ၊ ဘတော်ပျံ၊ မယ်တော်ပျံ ပွဲတွေမှာ ချိတ်ဆွဲပြီး ပြသ ရောင်းချခဲ့တယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာ ဆရာချုံဟာ အဲ့ဒီလို တီထွင် ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ပြသတဲ့ ပန်းချီပြပွဲလို့ ဆိုနိုင်မလားပဲ။
၁၉၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာချုံဟာ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးလမ်းနဲ့ ကျုံးကြီး လမ်းထောင့်က နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ် လေးခန်းတွဲမှာ ငှားရမ်း နေထိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျားသူဌေးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး နောက်မှာတော့ နေရေး စားရေးအတွက် ပူစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဆရာချုံကား အသားလတ်လတ်၊ အရပ် မနိမ့်မမြင့် အလွန်ရည်မွန်၍ သိမ်မွေ့ပုံရသည်။ ဆေးပေါ့လိပ် ကြိုက်သည်။ အဂ္ဂိရိတ် ဝါသနာထုံသည်။ သူ့ကျေးဇူးကို သိတတ်သည်။ စည်းကမ်းကြီးသည်။ ဘာသာရေးတွင်လည်း ကိုင်းရှိုင်းသည်။ ရှေးအခါက ရောင်နောက်တွဲ ထုံးလေ့ရှိပြီး ရန်ကုန်ရောက်ခါမှ ကတုံးတုံးကြောင်း သိရသည်။
ပန်းချီရေးဆွဲလျှင် သီချင်းကလေး တညည်းညည်းဖြင့် ရေးဆွဲလေ့ ရှိသည်။ ပညာကို ဝှက်၍ မထားတတ်၊ မသိနားမလည်၍ တပည့်ခံလာလျှင် ကျကျနန သင်ကြားပြသပေးလေ့ ရှိသည်။ နေမှု၊ ထိုင်မှု၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင် အလွန် မြန်မာဆန်သည်။ မန္တလေးမှ ပန်းချီဆရာ ဦးကြီးထက် ၁၁ နှစ်ခန့် ငယ်သည်။ ရန်ကုန်မှ ပန်းချီဆရာ ဆရာမြစ်ထက် ၁၂ နှစ်ခန့် ကြီးသည်။
ရေးသူ – ဦးမင်းနိုင်
This entry was posted in Download and tagged ပန်းချီ. Bookmark the permalink.
← ကျွန်ုပ်နှင့် ရွှေဥ ဥသော ငှက်အကြောင်း
တွေ့မိသမျှ မြန်မာ Blogger အကြောင်း →